Kooxda Manchester United oo la ciyaaraysa Bayern Munich… (Goormee iyo Goobtee?) | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Kooxda Manchester United oo la ciyaaraysa Bayern Munich… (Goormee iyo Goobtee?)
Kooxda Manchester United oo la ciyaaraysa Bayern Munich… (Goormee iyo Goobtee?)
(Manchester) 11 Juun 2018 – Kooxda Manchester United ayaa xaqiijisay inay kulamadooda isdiyaarinta xilli ciyaareedka cusub ku soo xiri doonaan kulan saaxiibtinnimo oo ay la dheeli doonaan Bayern Munich 05 bisha Agoosto.
Man United ayaa horay u shaacisay inay la kala ciyaari doonto Kooxaha Club America, San Jose Earthquakes, AC Milan, Liverpool iyo Real Madrid inta lagu guda jiro safarkooda xagaaga ee Mareykanka.
Kulanka ay la ciyaari doonaan Bayern ayaa imaan doona kaddib marka ay soo dhammaystaan safarkoodaas, kooxda macallin Jose Mourinho ayaana u safri doonta garoonka Allianz Arena kulankooda ugu dambeeya ee iskululeynta.
Guddoomiye ku xigeenka fulinta Man United ee Ed Woodward ayaa warkan u xaqiijiyey website-ka rasmiga ah ee kooxdiisa.
Waxa ay noqon doontaa markii ugu horreeyey oo ay labadaan kooxood kulmaan tan iyo bishii Abriil sanadkii 2014-kii, markaasoo kooxdii uu watay macallin David Moyes ee Man United ay la ciyaareen Bayern siddeed dhammaadka tartanka Champions League.
Previous articleXulka Nigeria oo ku goostay xulalka ka qayb gelaya Koobka Adduunka + Sawirro
Next articleIIB LA YAAB LEH: AC Milan oo iibsatey gabdhaha Brescia!!